Helista qaybta qaabilada - Barnmorskemottagning
Närhälsan waxaa ay ka koobantahay rugta daryeelka caafimaadka, rugta dayeela caafimaadka dhalaanka, rugta dayeelka hooyoyinka uurka leh, qaybta lagu qaabilo caruurta iyo dhalinyarada, rugta daaweynta caruurta iyo dhalinyarada, qaybta baxnaanada iyo qaybta cudurada ku dhaca xubnaha taranak ee haweenka iyo macdanta. Waxaa aan ka jirnaa boqolaal goobood oo ku kala yaala guud ahaan gobolka galbeedka Götalanad (Västra Göteland), markaa haddii aad jirato/bukooto ama uu dhaawac ku soo gaadho anaga ayaad nala soo xidhiidhi doontaa marka ugu horeysa.
Waxaa aad ku qorysaa shaashada qoraal si aad u hesho qaybta/rugta aad raadineyso magaceeda, degmada ay ku taalo ama cinwaanka. Waxaa kale oo aad xitaa raadin kartaa nooca qaybta/rugta aad raadineyso adiga oo xadidaya raadintaada. Waxaa aad ku raadin kartaa oo kaliya luqada af iswidhishka, natiijda ka soo baxda waxa aad raadineyso waxaa ay ku qoranatahay luqada af iswidhishka.